🥇 ▷ 15 Ugu Fiican Smart TV 2020 Web Browser ✅
15 Ugu Fiican Smart TV 2020 Web Browser
Bogagga shabakadda ayaa ku bilaabmay baahi milatari kumbuyuutarrada kumbuyuutarka. Si kastaba ha noqotee, markii waqtigu sii socdo, way sii horumartay oo hadda waad ku isticmaali kartaa TV-gaaga caqliga badan. Xusuusnow Qofna ma ogayn in aaladdaani ay lahaan karto awood ay ku lahaato xiriir network, laakiin hadda, waxay si wanaagsan ugu xirmeysaa shabakaddaada, oo si fudud waad u arki kartaa waxaad rabto. Sidaa daraadeed, maqaalkani waxa uu kugu hagi doonaa kugu filan si aad u adeegsato bogga internetka ee telefishanka smart smart TV ee 2020.
mid.Browser geesi ah
Browserka geesinimada leh ayaa ah biraawsarka shabakadda TV-ga ugu caqliga badan. Sidookale, waa bilaash, badbaado iyo soon; Waxay leedahay unug xayeysiis ku dhisan, amniga iyo ilaalinta dabagalka, oo ay weheliso batari la hagaajiyay iyo khibrada taariikhda. Isku xirka xayeysiiska isku dhafka ah ee biraawsarkan ayaa mas’uul ka ah abuurista mareeyn xayeysiis ah oo siman oo xayeysiis ah. Sidaa daraadeed, waxaa mahad leh shaqooyinkan aadka u wanaagsan ee ka dhigaya biraawsarkan mid lagu aqoonsan karo warshadaha. Markasta oo aad u tagto biraawsarka telefishanka ugu caqliga badan, u gudub biraawsarka Brave.
Waxay hubisaa badbaadadaada iyadoo ku siineysa kalsooni iyo asturnaan.
Biraawsarkan waa fududahay in la isticmaalo.
Waxay bixisaa waxqabad cajiib ah.
Waxay leedahay xawaare ugu badan.
Kani waa mid ka mid ah daalacashada telefishanka ee caqliga yar ee damaanad ka dhigeysa daalacashadaada qadka tooska ah, gaar ahaan marka boggagaagu ay si buuxda u shaqeeyaan oo furnaadaan. Tan macnaheedu waa inaad heli karto wakhti kasta waqti dambe adigoon lahayn xiriir internet ah. Sidookale, waxay lashaqeeysaa shaqo hab habeenimo ah, taas oo kadhigaysa isuduwaha macruufka habeen dambe. Si kastaba ha noqotee, uma imaanin codsi TV-ga ah oo Android ah. Taabadalkeed, waxay la mid tahay Firefox, iyo sidoo kale Chrome oo leh raritaan dhinaca ah.
Si fudud ayey u dhexaysa telefishanka, aaladaha mobilada, iyo miisaska desktop-ka.
Boggan soo iibsiga boggan waa dhakhso badan.
Keydi xogta oo yaree isticmaalka xogta.
Alaabtaani way fududahay in la isticmaalo.
Waa lama huraan inaad ku dallacdo TV-gaaga caqliga leh.
Inta badan dadka aan u isticmaalin Google Chrome waxay doorbidaan inay Mozilla u adeegsadaan biraawsar shabakad kaamil ah. Mozilla waxay kuu soo saareysaa istiraatijiyad la mid ah oo ay ku bixiso taleefan casriga ah. Qalabkani wuxuu u shaqeeyaa si sax ah isagoon la kulmin caqabado muhiim ah, xitaa markaad dooratid Firefox taleefankaaga smart. Xusuusnow in Firefox-gu isweydaarsado boodhadhkaaga oo kuu oggolaanaya inaad bogagga ugu wareejiso aaladda kale. Sidaa darteed, Thanks to sifooyinkaan aadka u fiican si alaabtan looga dhigo mid cajiib ah.
Waxay kuu damaanad qaaday inaad raadraacdo ilaalinta iyo sidoo kale biraawsarka gaarka loo leeyahay.
Qalabkani wuxuu la jaan qaadayaa dhamaan fidinta Firefox-ka ee telefishanka smart.
Dejintaada, Bookmarks, passwords kaamil ku ah mashiinnada oo dhan.
Waa badeecad aad u wanaagsan.
Alaabtaani waxay bixisaa waxqabadka ugu badan.
Gabi ahaanba maahan wax la taaban karo marka la adeegsado kontoroolka fog ee smart TV.
Qalabka “Kiwi” waa biraawsar telefishan smart smart ah oo kujira Chromium waxaana ku jira Webkit kaas oo u oggolaanaya inuu si dhakhso ah u shaqeeyo marka loo barbar dhigo biraawsarka kale. Waxaa sii dheer, waxay kaa ilaalinaysaa ka hortagga haakarisku inay marin u helaan aaladdaada riwaayadaha la’aan. Dhanka kale, sidoo kale waxay si dhakhso leh u kordhisaa Wada sheekaysiga Facebook-ga Astaamihiina waxay ka dhigaan biraawsarkan mid ku fiican suuqa. Markaa haddii aad ka walwalsan tahay raadinta biraawsarka telefishanka ee ugu caqliga badan markaa ha walwelin mar dambe oo u raadsado biraawsarka kiwi.
Waxay leedahay Xayeysiis bilaash ah oo ku furan Ad.
Biraawsarkani waa fududahay oo dhaqso ayaa loo adeegsadaa.
Waxay leedahay qaab habeen ah.
Waa kala aragti duwanaansho ka kooban sheekaysato u go’an oo wadaaga arrimaha bulshada, fikradaha, iyo xallinta.
Alaabtaani waxay bixisaa waxqabad wax ku ool ah.
Kordhinteeda ma bixiso taageero culus.
Tani waa mid ka mid ah daalacashada ugu muhiimsan ee warshadaha ee loogu talagalay TV smart. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka mid tahay daalacashada ugu caansan adduunka oo dhan. Khibrad la mid ah oo aad haysato inta aad isticmaaleysid Chrome kombiyuutarkaaga moobaylka ah waa isla isla midka aad u adeegsan doonto TV-gaaga caqliga badan. Ogsoonow in 90% boggaga internetka ee laga heli karo internetka ay marayaan baaritaan sax ah iyo sidoo kale kobcinta Google Chrome. Sidaa darteed, si loogu rakibo Google Chrome-kaaga telefishanka caqliga leh, waa inaad furaysaa Google Play Store oo aad kala soo degtaa qalabkaaga.
Waa sahlan tahay oo dhaqso ayaa loo adeegsadaa.
Waxay leedahay xannibaado isdabajoog ah iyo Adblockers xaasidnimo leh.
Alaabtaani waxay bixisaa waxqabad cajiib ah.
Si sax ah uguma shaqeynayo kontoroolka fog fog ee Mart TV.
6.Samsung internet browser
Qalabka internetka Internet-ka ee Samsung waa mid ka mid ah daalacashada ugu muhiimsan ee telefishankaaga caqliga leh. Markii hore waxaa loo sameeyay Samsung TV TV-yada kaliya. Si kastaba ha noqotee, hadda, waxaa wax looga beddelay inay ka shaqeyso dhammaan TV-yada caqliga leh. Tani waa guud ahaan warshadaha, iyadoon loo eegin nooca iyo nooca. Si aad si sax ah ugu aragto waxqabadka buuxa iyo astaamaha, waxaad u baahan tahay dukaan galaxy ah. Ogsoonow in codsigan noocan ahi uu la jaan qaadayo telefishanka Samsung iyo taleefannada oo keliya. Marka, u gudub biraawsarkaan waxaadna ku raaxeysataa khibrada ugu wanaagsan ee la socota.
Way fududahay in la isticmaalo.
Waxay la imaaneysaa kaaliyaha fiidiyowga ee gudaha kujira si loo wanaajiyo loona xoojiyo khibradaada daawashada fiidiyowga.
Biraawsarkani wuxuu dammaanad qaadayaa asturnaantaada iyo amnigaaga.
Waxay la socotaa kordhinta biraawsarka si loogu daro tarjumaanka waxyaabo badan oo kale.
Waxay leedahay culeys dhinaca dhinaca TV-ga smart ah.
7.Microsoft Edge browser
Microsoft awood uma lahayn inay si wax ku ool ah ula shaqeyso biraawsarrada boggeeda hore, waxaana laga yaabaa inaad la yaabban tahay sida ay ugu guuleysatay inay liiskaan ku taxnaato. Hagaag, waa inaad ogaataa in xadka cusub ee soosaarista bilaa-kuhalka ah ee ‘Chromium’ salka ku haysa la hagaajiyay. Si kastaba ha noqotee, tirakoobyada qaar ee xuduudaha biraawsarka cusub waxay muujinayaan inay kaamil tahay marka la barbar dhigo jiilka hadda jira ee Google Chrome. Thanks to sifooyinkaan aadka u fiican ee sameynta sheygan aan caadi aheyn.
Biraawsarkan ayaa maamusha furaha sirta ah iyo tarjumaadda adeegga.
Waxay leedahay qaab sifeysan oo khaas ah.
Waxay bixisaa waxqabad aan caadi ahayn.
Waxaad ubaahantahay jiirka ku xiran Bluetooth si aad hoos ugu dhajiso boggagaaga, qaasatan inta aad aqrinaysid.
Alaabtaani waa mid ka mid ah daalacashada saxda ah ee TV smart; waqtigiisu waa biraawsarka mashiinka ‘Puffin TV’. Tan ugu muhiimsan, Puffin wuxuu awood u yeeshay inuu ku habeeyo biraawsar telefishan caqli leh kahor Google Chrome isagoo leh karti buuxda oo uu kuugu soo bandhigo dhammaan muuqaalada biraawsarka. Intaa waxaa dheer, waxa ku jira si habboon ayaa loogu wanaajinayaa oo loo xiraa TV caqli badan oo leh meel fog oo shaqeynaya. Sidaa darteed, tan macnaheedu waa in Play Store uu ku leeyahay rakibaal TV-gaaga caqliga leh; sidaas darteed, rarka dhinac looma baahna.
Kordhinta tooshka oo samee taageerada taageerada muuqaalka muuqaalka.
Alaabtaani sidoo kale waxay xakameysaa iftiinka iyo mugga.
Waxay bixisaa fududeynta adeegga VPN.
Waa biraawsar tayo leh.
Sababta ka dambeysa aasaaska DuckDuckgoBrowser ee 2008 ayaa ah in baaritaannadaada laga dhigo kuwo sir ah. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay leedahay labo faa iido: xogtaada ma geli karto gacmo aan loo baahneyn, iyo marka labaad, taariikhdaada biraaqashadaada ma faragelin karto natiijooyinkaaga. Waxay sidoo kale ka fogaaneysaa raadraaca kooxda saddexaad. Ayaa markaa mas’uul ka ah qaadashada maktabadda ururinta macluumaadkooda mashiinka ilaa aaladda.
Shaygaani waa mid miisaankiisu yar yahay.
Waxay ku siinaysaa badbaado iyo asturnaan.
Waxay leedahay badhan si loo nadiifiyo taariikhda raadintaada.
Biraawsarkani wuxuu si otomaatig ah u tirtiraa dhammaan howlahaaga isla markaaba la xidho.
Mawduucdeeda caadiga ah waa mugdi.
Kani waa biraawsar telefishan xaadir ah oo telefishankaaga caqliga leh; Waxaa loo qaabeeyey loona qaabeeyey si looga gudbo xaddidaadda xawaaraha asaasiga ah ee dhammaan daalacashada TV-ga. Xusuusnow in biraawsarkani yahay xawaare sare, oo ka dhex socda daalayaal kale oo badan. Waxaa lagu qiimeeyaa 4.2 oo leh 10,000 oo rakibayaal ah, waana fududahay in la isticmaalo. Sidaa darteed, Thanks to sifooyinkan aadka u fiican si looga dhigo biraawsarkan ku habboon adeegsiga.
Waa maareeye soo degsan oo dhisay.
Biraawsarkani wuxuu taageeraa Bookmarks iyo tabsyada.
Waxay sifiican ula shaqaysaa telefishankaaga smart smart TV fog.
Way fududahay in la isticmaalo
Si hufan ugama shaqeyso dhammaan TV-yada caqliga leh.
kow iyo toban.Browd biraawsar
Bogagga la soo bandhigay wuxuu si hufan ugu shaqeeyaa telefishanka Sony. Si kastaba ha noqotee, si aad u shaqeyso si aad ufiican, waxaad u baahan tahay kontoroollada fog oo khaas ah oo leh D-pad si kor loogu qaado waxqabadka. Waxaad barnaamijkan si toos ah ugala soo bixi kartaa dukaanka ciyaarta smart smart TV kaaga maxaa yeelay uma baahna rar dhinac. Bog furahan uma baahna jiirka ama furaha si uu ushaqeeyo ilaa inta koontaroolkiisa fog uu la jaan qaadi karo. Dhanka kale, biraawsarkan waa mid hagaagsan, dhakhso badan oo fudud, sidaa daraadeed waxay kuu oggolaaneysaa inaad si gaar ah ugu habbooneyd marin-haynta bogaggaaga mareegahaaga.
Waxay leedahay interface soo jiidasho leh.
Waa biraawsarka ugu dhakhsaha badan dhammaan.
Alaabtaani sidoo kale waa mid la jaan qaadi karta oo deggan.
Waxay bixisaa qaab ciyaareed cajiib ah.
Waxaa kaliya la shaqeeya Sony smart TV.
Biraawsarkan ayaa leh in kabadan 50 milyan oo rakibayaal ah. Tani waxay ka sheegaysaa wax badan oo ku saabsan caannimadeeda iyo sababta ka dambeysa in la aqbalo TV-yada caqliga leh. Intaa waxaa sii dheer, waxaa ku xardhan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kontaroolada dhaqdhaqaaqa, cayaar-yahannada Adobe adobe, iyo kuwo kaloo badan. Waxay sidoo kale kordhineysaa soo degsashada maareeyaha la dhisay waxayna kuu oggolaaneysaa inaad mashiinnada baarista sida Bing, Yandex, Yahoo, iyo Google.
Waxay kuu dammaanad qaadeysaa asturnaantaada iyo amnigaaga.
Alaabtaani waxay bixisaa taageero noocyo badan, oo ay ku jiraan kombiyuutaro.
Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan tikniyoolajiyadda ciyaarta ee flash, sida fiidiyowga qulqulka.
Waxay u shaqaysaa sifiican
Alaabtaani waxay taageertaa dhaqdhaqaaqyada jirka.
Lama jaan qaadi karo kordhin kasta oo la bixiyo.
13.Bog internet ah oo loogu talagalay Android TV
Kani waa biraawsar TV-ga bilaashka ah ee Android ah oo guud ahaanba loo rogay TV caqli badan. Ku dadaal waxqabadka wanaagsan ee fudud ee baarista internetka; hase yeeshe, waxay leedahay xuduudo gaar ah oo ay tahay in laga feejignaado. Sidaa darteed, biraawsarkan ayaa si gaar ah loogu talagalay ujeedooyin gurmad ah haddii ay dhacdo biraawsarka ugu weyn uusan sifiican u shaqeynin. Lacala hadii aad ubaahantahay biraawsar raadiye telefishankaaga casriga ah, u raadsada mashiinka barnaamijka ‘Android TV’.
Waxay leedahay taageero shaashad video oo buuxda ah.
Alaabtaani waxay kadhigtaa calaamadaynta buuggaagta waxayna keydisaa boggaga kugu habboon.
Waxaa lagu maamuli karaa aalado kaladuwan, sida qalabka ciyaarta, xakameynta D-pad iyo koontaroolada fog fog ee Android ee telefishanka fog.
Waxay soo bandhigtaa natiijooyin cajiib ah.
Waxay qaadataa waqti dheer in la cusbooneysiyo.
14.Bogga Internetka ee loo yaqaan ‘Brad browser’
Qalabka Internetka ee ‘Silk Browsing’ wuxuu si caadi ah ugu shaqeeyaa TV-yada caqliga badan. Si kastaba ha noqotee, ogsoonow xaddidnaanta barnaamijyada kale ee barnaamijkaaga ah ee TV-ga Android. La soco in Amazon Waa degel internet; Sidaa daraadeed, biraawsarka loo yaqaan ‘silk browser’ mas’uul kama ahan kaliya daawashada filimka iyo baarista internetka, laakiin sidoo kale Amazon Iibso oo maareyso aaladaha guryaha casriga ah ee leh Alexa.
Biraawsarkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isticmaasho amarrada codka si aad u dhex gasho oo aad u baarto.
Way fududahay in la maareeyo.
Alaabtaani waa mid si buuxda u waafiican.
Ku shaqee 24/7 ee Amazon Cloud
Kuma jiro Google Play Store.
shan iyo toban.Flynx
Qalabkaan TV-ga caqliga leh wuxuu furaa xirmooyinka xirmooyinka ee aad riixdid si uu kuu siiyo fikrado fiican oo ku saabsan waxa ka dhici kara bogga ku xiga. Haddii ay dhacdo inaad damacdo ama xumato, bogga ku xigga ayaa isla markiiba ku rakibi doona daaqad leh shaashad buuxda. Dhanka kale, waxay keydinaysaa taariikhdaada bogag xamuul ah; sidaa darteed, waad eegi kartaa markii aad khadka ku jiraan. Marka, Thanks to sifooyinkaan waaweyn, ee samaynta sheygan si aan caadi aheyn oo cajiib ah.
Waxay leedahay interface fudud.
Waxay kuu damaanad qaadeysaa 15 taageero luuqadeed, sida Shiinaha iyo Jabaan.
Waxaad leedahay xayeysiiyaha xayeysiinta
shan iyo toban.Browser TVWeb
Malaayiin dad ah ayaa leh xaruntaan; Waxaa ugu wanaagsan TV-gaaga caqliga badan. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay culeys dhinaca dhinaca TV-ga Android ah; Waxay leedahay waayo-aragnimo aad u wanaagsan sida kan casrigaaga ah. Waxay u shaqaysaa si sax ah, sidaa daraadeed waxaa qiimeeyay Rarity Co. Ltd, oo ah shirkad Jabaaniis ah oo wadday dalabyo kala duwan oo guulo leh.
Waxaad leedahay waayo-aragnimo siman oo xawaare sare leh.
Waa bilaash in la isticmaalo.
Shaygaani waa 3 MB cabir ahaan.
Waxay bixisaa waxqabadka ugu badan.
Lama jaanqaadi karo dhammaan bogagga.
Marka loo eego dib-u-eegistaas, hadda waxaad si fiican ula socotaa daalacashada telefishanka ee smart smart ugu wanaagsan ee suuqa. Sidaa darteed, adiga ayay ku jirtaa inaad si wax ku ool ah u doorato waxa ugu fiican ee kuugu adeegi kara si hufan. Waxaan rajeyneyaa in maqaalkani waxtar yeelan doono inta aad isku dayeyso inaad hesho ugu sareysa 15 Telefishanka Sare ee Telefishanka Sare ee Smart 2020.